Homeसमाचारजुम्ल्याहा दिदीबहिनी स्मारिका र सामरिकासँग पल (भिडियो हेर्नुहोस्)
December 27, 2020 admin समाचार 4892
गायक विशाल निरौ’लाको नयाँ गीत रिलिज भएको छ । ‘माया लाउन मसँग’ बोलको गीतमा विशालसँगै प’छिल्लो गायिका रचना रिमालको समेत स्व’र सुन्न सकिन्छ ।
गीतमा पछिल्लो समय टिकट’कबाट चर्चा कमाएका जुम्ल्याहा दिदीबहिनी स्मारिका र सामारिका ढकालले मोडलिङ गरेको छ । उनीहरुको अपोजिटमा अभिनेता पल शाह फिचर्ड छन् । गीतको भि’डियोमा दुवै दिदीब’हिनीसँग पलको रोमान्स देख्न सकिन्छ ।
त्यस्तै यो गीत रचना, स्मारिका र सामा’रिकाको समेत पहिलो सहकार्य हो । गीतमा केशव बैरागी माइ’लाको शब्द रहेको छ भने ज्ञानेन्द्र गिरीको सं’गीत रहेको छ ।
June 22, 2021 admin समाचार 2337
February 4, 2021 admin समाचार 4453
April 19, 2021 admin समाचार 3033
सुतेर पनि इम्युनिटी पावर बढाउन सकिने यस्तो छ जन’स्वास्थ्य विज्ञ डा. पाण्डेको सुझाव (215804)
भाण्टा खाँदा हुने १३ फाइदा’हरु (207589)
विवाहित महिलाले किन सिउँदोमा सिन्दुर लगाउँछन् , जान्नुहोस रहस्य.. (207244)
कपालमा चाँया परेर हैरान हुनुहुन्छ ? यी हुन् चाँया हटाउने घरेलु उपाय… (206117)
सुशान्त केश’ले लियाे नयाँ मोड, रियाको भाइको ‘गोप्य च्याट’ बाहिरियो…हेर्नुहोस् (204930)
छोटो समयमै छिटो कपाल बढाउने तरीका यस्तो छ: थाहा पाहुनुहोस् (204135)
यसरी बनाउनुहाेस्: मात्र केही समयमानै तपाईंको पहेलो दाँत चम्किलो … (202398)
चर्चित हाँस्यकलाकार तथा समाजसेवी धुर्मुसको जन्मदिन आज, कति वर्ष लागे उनी ? थाहा पाउनुहोस् (202254)
लियोनेल मेसी बने विश्वको सबैभन्दा बढी कमाउने फुटबलर, कति कमाए त उनले ? थाहा पाउनुहोस् (194156)
प्रहरीले पक्रा’उ गर्न खोजेपछि भिटेनले अचानक यस्तो भने, सबैलाई गरे यस्तो अनुरोध (भिडियो सहित) (171334)